Madaxweyne ku xigeenka JSL oo Maalinta ololaha Xisbiga Kulmiye la dabaal degay Gobolada Galbeedka dalka. |
Madaxweyne ku xigeenka JSL oo Maalinta ololaha Xisbiga Kulmiye la dabaal degay Gobolada Galbeedka dalka.
Geerisa(GNN):-Madaxweyne ku xigeenka JSL Mudane C.raxmaan C.laahi Ismaaciil Saylici oo ay weheliyaan Wasiirrada Horumarinta Caafimaadka , iyo Gaashaandhiga JSL ayaa gaadhay deegaanka Geerisa halkaas oo si balaadhan loogu soo dhaweeyay Waxayna Deegaanada Dabadilaac, Fardo-lagu-xidh iyo Geerisa ee Gobalada Awdal iyo Sallal kaga qayb galeen ololaha maalinta koowaad ee Xisbiga Kulmiye ee diyaar garowga doorashooyinka.
Xubno ka tirsan Murashixiinta golaha Wakiillada ee ka sharaxan Xisbiga Kulmiye oo halkaas ka hadlay ayaa balanqaaday inay si daacadnimo iyo dal jacayl leh u gudan doonaan hadii ay ka mid noqdaan guulaystayaasha doorashooyinka isku sidkan.
Wasiirrada Horumarinta Caafimaadka , iyo Gaashaandhiga JSL ayaa Shacabka gobolada Awdal iyo Salal ka dalbaday inay maalinta codbixinta doorashada ay codkooda siiyaan Murashixiinta uu Xisbiga Kulmiye u soo xulay oo ay ku tilmaameen murashixiin la hubo oo kalsooni badan lagu qabo inay dalka iyo dadkaba wax badan ka bedelaan.
Madaxweyne ku xigeenka JSL Mudane C.raxmaan C.laahi Ismaaciil ayaa u mahadnaqay bulshada deegaanka Goboladda Galbeedka ee Taageera Xisbiga Kulmiye waxana ay ku adkeeyeen inay taageeradooda muujiyaan maalinta codaynta.